Sen. Siciido “DF Hay’adaha lacagta ku bixiya waxyaabaha aanan loo baahneen haku amarto in ay ku qodaan! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sen. Siciido “DF Hay’adaha lacagta ku bixiya waxyaabaha aanan loo baahneen haku...
Sen. Siciido “DF Hay’adaha lacagta ku bixiya waxyaabaha aanan loo baahneen haku amarto in ay ku qodaan!
Shaaciye.com-Senator Siciido Xasan Cusmaan oo katirsan Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Dowladda Federaalka laga doonayo in ay la xisaabtanto hay’adaha Samafalka.
Waxa ay si gaar ah u sheegtay in ay jiraan Hay’ado lacago ku bixiya Meelo aanan loo baahneen, sidaa awgeed waxa ay Dowladda u jeedisay in ay ku amarto in ay qodaan Ciid Buuxisay Wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Sababaha keena in ay Karkaarada jabsadaan oo ay sameeyaan Fatahaadda waxa ay ku tilmaamay in ay tahay Ciidaas xirtay, kaliyana looga bad-baadi karo fatahaadda ay sameynayaan In la qodo Keydad biyaha ay galaan kolka uu buux dhaafiyo.
Dalka waxa ay sheegtay in uu kasoo baxay Abaar muddo heysatay, taasina ay ka dhalatay Biyaha Wabiga oo aanan laheyn Keydad marka uu biyo yareeyo dib loo isticmaalo.
Qandaraasyada Hay’adaha ay ku bixinayaan Mashaariicda aanan Dadka waxba u tareen ama Baahida loo qabo ayay sheegtay in la talin lagala sameeyo si lacagtaasi loogu howlgalo si biyo Xireeno, Keydad iyo qodis loogu sameeyo Wabiga.